နူးညံ့သောအသိပေးစာအဆိုပါမော်ကွန်း - ထို rayhab
အဆောက်အဦး STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) 595 ၏ Sivas အတွင်းပိုင်းစီးပွားရေး TC အထွေထွေဒါရိုက်တာ၏ဘူတာလမ်းမကြီးတိုးချဲ့မှုအကြား Sivas-Kars လိုင်း kmxnumx + 300 595 kmxnumx ။ Sivas ဘူတာအဆောက်အဦးအကြားဒေသဆိုင်ရာဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံး Sivas-Kars လိုင်း kmxnumx + 6004kmxnumx [ပို ... ]
Aydınဘူတာနှင့် STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)3၏သဘာဝဓာတ်ငွေ့ TR အထွေထွေဒါရိုက်တာ၏အိမ်ရာကူးပြောင်းခြင်းဖျော်ဖြေ။ သဘာဝဓါတ်ငွေ့၏ဒေသဆိုင်ရာဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံးAydınဘူတာနှင့်ကူးပြောင်းခြင်းပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအမှတ် 4734 ၏အိမ်ရာဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် Making [ပို ... ]
STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)3များ၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကူးပြောင်းခြင်းသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးပြုလုပ်ခြင်း၏Halkapınar Loko ကို Maintenance ။ ဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံးHalkapınar Loko ကို Maintenance ဆိုင်အမှတ် 4734 သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးေူပာင်းလဲရေးကို၏ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပြုသောအမှု [ပို ... ]
သလဲသီးKarkamışလက်ဝါးကပ်တိုင်6၌ပြစ်မှားမိတံတားနှင့် Debus ပြီးတော့လိုင်းများ TCDD အပေါက်တွေသန့်ရှင်းရေး။ တံတားနှင့် Culvert Debus အတွက်ထိုပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ်၏အမှုကိုပြုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 19 အပိုဒ်ပျော်စေလိုင်းများအကြားဒေသန္တရရုံးNarlı-Karkamış [ပို ... ]
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတားအဆီး STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5၏ TC အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးဝယ်ယူပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါ PC များ5မှ ZONE ဇုံမန်နေဂျာယ်ယူခြင်းဦးစီးဌာန7BÖLGကာကွယ်ရေးအဆင့် Cross protected အောင် (အတားအဆီး drive, Light-အသံအရည်အသွေးကို Cross ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်များနှင့်မြို့တံခါးဝ၌ [ပို ... ]
TCDD3။ လျှပ်စစ်စက်မှု Barrier အဆင့် Crossing Barrier ၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုလေလံ AND SUBJECT ကို FOR Hale ကညီလာခံစီးပွားရေးေူပာင်းလဲရေးကိုနူးညံ့သောအပိုဒ် 1- စီးပွားရေးပိုင်ရှင်ပြန်ကြားရေးအုပ်ချုပ်ရေး 1.1 အရေးကြီးစောင့်။ အဆိုပါစာချုပ်ဝင် Entity; က) [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Project မှန်ဆောင်မှုများအဘို့တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းမီးရထားလိုင်းလက်ခံရရှိပြီး OSB Connections ကို STATE ရထားလမ်းအုပ်ချုပ်ရေးလေ့လာရေး TC အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး (TCDD) 1 လိမ့်မည်။ ဒေသဆိုင်ရာရုံးသုံးပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းနှင့် Inventory CONTROL လုပ် SA တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်း [ပို ... ]
အမျိုးမျိုးသောYaptırılacaktırပြီးတော့ TCDD6အတွက်ကီလိုမီတာလမ်းမြေပေါ်လူကူးတံတားအကြားတွင် Konya-Karaman ။ ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအပိုဒ်၏ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အားဖြင့် Konya-Karaman လမ်းခုံးကျော်တံတားလမ်းသွားလမ်းလာနှင့်စည်းမျဉ်းအမှတ် 4734 19 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအတွက်အမျိုးမျိုးသောမိုင်အကွာအဝေးကြားမှာဒေသန္တရရုံး [ပို ... ]
ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်အားဖြင့်ပွင့်လင်းနူးညံ့၏အပြောင်းအလဲများဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏ HRT ခေါင်မိုး & တံခါးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲYaptırılacaktırတူရကီ Wagon စက်မှုလုပ်ငန်းTÜVASAŞ / Purchase HRT ဦးစီးဌာနနှင့်တံခါး Shopping ခေါင်မိုးကုတ်အင်္ကျီ၏ပြောင်းလဲမှု [ပို ... ]
လောင်စာဆီတူရကီရထားလမ်းစက်စက်မှုလုပ်ငန်း INC ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ) နံပါတ် 4734 လောင်စာဆီဝယ်ယူမှုများအပိုဒ် 19 အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းတင်ဒါနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များနေသောခေါင်းစဉ်: မှတ်ပုံတင်ခြင်းနောက်ဆုံး [ပို ... ]
ဓါတ်ရထားလိုင်းကတ္တရာသုံးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး Metro အစ္စတန်ဘူလ်ငါ၏အ plentmix စီးရီးစက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေး INC ဓါတ်ရထားလိုင်းများ plentmix စီးရီးကတ္တရာသုံးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးငါ့ကိုအိတ်ဖွင့်တင်ဒါပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအပိုဒ်၏ယောဘကိုအမှတ် 4734 19 ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အညီ [ပို ... ]
STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4၏Yaptırılacaktırသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးအပေါ်အမှတ်တရကွန်ကရစ် Panel ကိုပတျဝနျးကငျြ။ ဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံး TCDD4။ အဆိုပါ 14.710 မီတာ ZONE အမျိုးမျိုးသောဒေသန္တရရုံးအတွက် panel မှာကွန်ကရစ်နံရံကီလိုမီတာ [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Samsun-Amasya-Field İhata Ring ကို A-ဝှမ်း-ပေါ့ပလာပင်ဘူတာ၌ပြစ်မှားမိ
အဆိုပါ Samsun-Amasya-Field İhata STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4၏ Ring ကို A-ဝှမ်း-ပေါ့ပလာပင်ဘူတာသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး၌ပြစ်မှားမိ။ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် STOCK CONTROL ZONE SERVICE ကိုစီမံခန့်ခွဲရေး Samsun-AMASYA-ZİLE-အင်တုံ-ပေါ့ပလာပင်İHATA FIELD တွင်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဘူတာ 4734 19 အပိုဒ်ကိုရေတွက်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအောင် [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အ Kars-tumblers-နယ်စပ်ရေးရာလိုင်းဖြတ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရေဒီယိုစနစ်တည်ထောင်မှာတွေ့ရှိ
STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4၏လိုင်းဖြတ် TC အထွေထွေဒါရိုက်တာမှာတွေ့ရှိသည့် Kars-tumblers-နယ်စပ်ရေးရာဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏ရေဒီယိုစနစ် Krul ။ ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏ဘုတ်အဖွဲ့အမှတ် 4734 ဖြတ်တောက်ခြင်းမှာတွေ့ရှိဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအဘို့အဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံး Kars-CANBAZ နယ်စပ် LINE ရေဒီယိုစနစ်သုံး [ပို ... ]
ကွန်ကရစ်အမှတ်တရ Panel ကို STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4၏ TC အထွေထွေဒါရိုက်တာပေါ်လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေးပတျဝနျးကငျြ။ ဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံး TCDD4။ မီတာကွန်ကရစ်နံရံများတွင်အမျိုးမျိုးသောဒေသန္တရရုံးကီလိုမီတာ ON အဆိုပါ 9.650 ဇုံ [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Project မှစစ်တမ်း Project မှန်ဆောင်မှုများ၏အဘိတ်ဘို့အလေ့အကျင့်များGüzelbeyliမူကွဲလက်ခံရရှိလိမ့်မည်
စီမံကိန်းစစ်တမ်း Project မှန်ဆောင်မှုများ၏အဘိတ်ဘို့အလေ့အကျင့်များGüzelbeyliမူကွဲ STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ဝယ်ယူအားဝယ်ယူခြင်းနှင့် Inventory ထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာ၌အင်ဂျင်နီယာ SERVICE ကိုရုံးGüzelbeyliမူကွဲ AND Consultancy Services ဒေသတွင်းပြင်ဆင်မှု [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Ray တိုက်နယ်ပစ္စည်းဝယ်ယူပါလိမ့်မည်
ပစ္စည်းကိရိယာ၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုပိုင်ဆိုင်မှုများရထားလမ်းကမ်းလှမ်းချက် SUBJECT ကိုတင်ဒါမပါလိမ့်မယ်နှင့်ဆက်စပ် Entity 1 ချုပ်ဝင်အပေါ်အပိုဒ် 1.1- ပြန်ကြားရေးအရေးကြီးဝယ်ယူ။ အဆိုပါစာချုပ်ဝင် Entity; က) အမည်: TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုခ) [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Gölbaşıဘူတာ, 6-10-17 Noli Lodge အစီအစဉ်သည်ဧည့်သည်အိမ်၏ Scope ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ပြန်လည်မွမ်းမံစစ်တန်းလျားအလုပ်သမားများ
STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)6၏ Baraka TC အထွေထွေဒါရိုက်တာ၏ Scope ပြန်လည်မွမ်းမံ Golbasi ဘူတာ, 10-17-5 Plan ကိုအမှတ် Lodge, တည်းခိုခန်းများနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအလုပ်သမားများ။ 2018 / 403406 ယောဘကိုခေါင်းစဉ်: Golbasi ဘူတာ, 6-10-17 အစီအစဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးတစ်ဝိုက်တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းနံပါတ် purchasing [ပို ... ]
Sivas ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရေးစင်တာနှင့်မီးရထား Link ကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင် TC STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် Sivas ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာ (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှုနှင့်ရထား Link ကို (Ietap) 4734 ၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 19 ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ် [ပို ... ]
STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5၏လမ်းအလုပ်လုပ်Yaptırılacaktırသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေဒါရိုက်တာ။ : - 2018 / 409666 ယောဘကိုခေါင်းစဉ်:: Fevzipaşa Diyarbakir-လိုင်းမိုင်အကွာအဝေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း 146 070 + မှာတံတားဝန်ထမ်းရေးရာဝန်ဆောင်မှုလမ်းမကြီးတင်ဒါအမျိုးအစားပြုလုပ်ခြင်း MANAGEMENT တစ်ဝိုက်တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းနံပါတ် purchasing [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Toprakkale-Fevzipaşa-သလဲသီးဟာတံတားနှင့် Culvert Debus သန့်ရှင်းပြီးတော့မှန်ကန်သောတည်းဖြတ်လိုင်းများအကြားတွေ့
Toprakkale-Fevzipaşa-သလဲသီး Debus သန့်ရှင်းရေးနှင့် TCDD6ပြုလုပ်ခြင်းတည်းဖြတ်ခြင်းလိုင်းများအတွက်တံတားနှင့် Culvert အကြားတွေ့သည်။ ဒေသန္တရရုံး Toprakkale-Fevzipaşa-သလဲသီးဟာတံတားနှင့် Culvert Debus သန့်ရှင်းရေးနှင့်ချန်နယ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေအမှတ် 4734 ၏ Arrangement ပြုသောအမှုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အကြားတွေ့ [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Slope စကတ်အကြား Konya-Karaman မြေပေါ်အတွက်ဒေါက်အမှတ်တရအဖုံးများနှင့် Pera
Slope အဝတ်နှင့်ဖေရက်၏အနက် Coating TCDD6အကြားတွင် Konya-Karaman မြေပေါ်အတွက်က Wall ဒေါက်။ လျှောစောက်ဒေါက်အဝတ်နှင့်အမှတ်တရအကြားဒေသန္တရရုံး Konya-Karaman မြေပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် Pera အမှတ် 4734 19 ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များဖုံးအုပ် [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Fevzipaşa - TCDD ၏ကောင်တီပွင့်လင်းအာကာသစင်တာမှပိတ်ခြင်းမွေးမြူ၏စီးပွားရေး Meydanekbez လိုင်းဉမင်လိုဏ်ခေါင်းတွေ့ရှိရ
တံတား BRIDGE ဝယ်ယူရေးအသိပေးစာ TCDD6အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒေသန္တရရုံးFevzipaşa - Meydanekbez မြို့ Center ကလိုင်း Islahiye ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအပိုဒ်၏ယောဘကိုအမှတ် 4734 19 ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အညီပွင့်လင်းနူးညံ့၏ TCDD ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအဆောက်အဦးအပြင်ပိတ်ခြင်း၌တွေ့ [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: DMI Buy ရန်အဘို့အ xnumx'lik ကိုစုပ်ယူရှော့ခ်ပါလိမ့်မယ်
xnumx'lik DMI ကိုစုပ်ယူဝယ် IRB မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ရှော့ခ်မည်ဟုTÜVASAŞအထွေထွေညွှန်ကြားမှု: လေလံ AND SUBJECT ကို FOR 15000 / 2018 နူးညံ့သောအပိုဒ် 411699- ပြန်ကြားရေးအုပ်ချုပ်ရေး 1 အရေးကြီး။ အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေး; က) အမည်: TÜVASAŞအထွေထွေညွှန်ကြားမှုခ) လိပ်စာ: Mithatpaşa [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဗန် Gara Gara နှင့်အစွမ်းသတ္တိ၏လယ်ပြင်တွင်ငလျင်လှုပ်သဖြင့်တွေ့ရသောအဆောက်အဦး၏လူငယ်စွမ်းရည်မြင့်မားရေးစီမံကိန်းအဘိတ်
စစ်တမ်း Project မှန်ဆောင်မှုများ STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ စီမံခန့်ခွဲရေးတစ်ဝိုက်ဗန် Gara Gara နှင့်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူရေးအမှတ် 4734 အတွက်ကွင်းဆင်းလုပ်ငန်းခွင်၏ငလျင်ပြင်းအားတွေ့အဆောက်အဦး၏လူငယ်စွမ်းရည်မြင့်မားရေးစီမံကိန်းအဘိတ် purchasing [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ချမှတ်ခြင်းသံသယ၏ယာယီစွန့်ပစ်သိုလှောင်ဒေသများ ESHOT အထွေထွေညွှန်ကြားမှု
ယာယီစွန့်ပစ်သိုလှောင်ဒေသများ၏ ESHOT အထွေထွေညွှန်ကြားမှုသံသယ ESHOT ဌာနချုပ်ရုံးအဆောက်အဦးဌာနဌာနဆန်းစစ်ချက်စီမံကိန်းများနှင့်သံသယယာယီစွန့်ပစ်သိုလှောင်ဧရိယာအမှတ် 4734 အများပြည်သူဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အောင်၏စာချုပ် ESHOT အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၏အကျင့်ဌာနအောင်လိုက်တဲ့အခါ [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တူရကီမြေအောက်ရထားရထားဘီးစီးပွားရေးလှံတံချောဆီကိုများနှင့်ပွတ်တိုက်အားမွမ်းမံပိုင်ဆိုင် Buy ပါလိမ့်မယ်
တူရကီက Metro စီးပွားရေးရထားဘီးချောဘားနှင့်ပွတ်တိုက်အားမွမ်းမံရထားလမ်းစနစ်ဌာနတူရကီက Metro စီးပွားရေးမီးရထားရထားဘီးအမဲဆီ Stick နှင့်ကုန်စည်၏ပွတ်တိုက်အားမွမ်းမံဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်၏အတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးကိုဝယ်လိမ့်မယ်လေ့ကျင့်ပိုင် [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကွန်ကရစ်အိပ်ပျော် Machine Tools န့ ်. ဝယ်ယူရမည်
ကွန်ကရစ်အိပ်ပျော် Fittings န့ ်. ပစ္စည်းကွန်ကရစ်သမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် (TCDD) Sivas ကွန်ကရစ်ပာစက်ရုံရုံးတစ်၏ 4734 ဆောင်းပါး၏ DONATI တင်းမာမှုများစက်နှင့်တပ်ဆင်ခြင်းဧည့်ခံ 21 ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ်သွားလာလမ်းကြောင်းဝယ်ယူပါလိမ့်မည် [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ထူးချွန်စီးပွားရေး Down ပိတ်ပွဲအဆိုပါလေယာဉ်ရုံသို့ယူဆောင်အပေါ်မှငှက်မြင်ကွင်း crane
overhead crane ထူးချွန် STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4၏လေယာဉ်ရုံစီးပွားရေး TC အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး Down ပိတ်ပွဲဖြစ်လာထံသို့ယူဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် STOCK CONTROL ZONE SERVICE ကိုစီမံခန့်ခွဲရေး GANTRY crane ပြည်နယ် 4734 လေးစားသည့်တံခါးပိတ်လေယာဉ်ရုံဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏ထိပ်သို့ဖွဲ့စည်းခဲ့ [ပို ... ]
STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)2များ၏လျှပ်စစ်Yaptırılacaktırသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေဒါရိုက်တာ။ စီမံခန့်ခွဲရေး SERVICE ကိုတစ်ဝိုက် purchasing Ilorin ၏ဒေသဆိုင်ရာ2ÇARDAKBAŞ, SİNCAN-Hasanbey နှင့်နည်းပညာအဆောက်အဦး၏ Electric ဘုတ်အဖွဲ့ Sefaatli-KAYSERI International Business သက်တမ်းတိုးနဲ့အတူကားဆွဲနည်းပညာဆိုင်ရာတည်ဆောက်ခြင်းဟာ Sazi SIGNAL Electric LINE [ပို ... ]